ဘုန်းကျော်: Jun 10, 2010
လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဌာနချုပ် (မဲ့ဆောက်) သည် ကိုယ်သာလျှင် လူ ဖြစ်သည်..ဆိုသည့်အပေါက်မျိုးချိုးနေသည်။ သူတို့ကို NED သာ ငွေမပေးလျှင် ထမင်းငတ်မည့် လူတန်းစားဖြစ်မည်ကြောင်း...။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Thursday, June 10, 2010
ဒါကို မိုက်မိုက်ပြည်ကာတွန်းကနေရတာပါ။ မိုက်မိုက်ပြည်ဆိုတာက တကယ့်ကိုအခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့ ဘ၀ကို ထင်ဟတ်ပြနိုင်တဲ့ကာတွန်းဆရာတစ်ဆူပါ။ အခုတော့ သေပြီလားမသိဘူး။
ဒီစာသားလေးကို ကျနော် ငါးတန်းနှစ်လောက်ကတည်းက အရမ်းသဘောကြခဲ့တာ။ အိမ်ရှေ့ မှာကိုမြေဖြူနဲ့ရေးပြီးနေ့တိုင်း မှတ်မိအောင်ဖတ်ခဲ့တယ်။ အဲတုံးက မိုက်မိုက်ပြည်ကာတွန်းလေးကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးဖတ်တယ်။ နောက်ပြီးသုတစွယ်စုံ၊ သူဌေးကြီး ဦးကပ်စေး၊ ရွှေသေးဂျာနယ်တွေက ကျနော့်ရဲ့  လူစွမ်းကောင်းတွေပါပဲ။
အသက်ကြီးလာတော့ ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခစာတွေကိုဖတ်တယ်။ အရမ်းသဘောကြတယ်။ သူ့ထဲက ဇာတ်ကောင်တွေအတိုင်းဖြစ်အောင် တခါတလေ လေ့ကျင့်တယ်။
နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးနယ်ထဲရောက်တော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို အတုခိုးတယ်။ ကြာလာတော့ စာရေးဆရာတခုတည်းကို မကိုးကွယ်တော့ဘူး။ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုက်တဲ့ စာရေးဆရာကိုသဘောကျတယ်။
ကဗျာနဲ့ပက်သက်ရင် ဆရာ မင်းသုဝဏ်၊ ဆရာဇော်ဂျီတို့ရဲ့ ကဗျာတွေကိုကြိုက်တယ်။ တောရိပ်တောင်ရိပ်နဲ့လွမ်းစရာကောင်းတယ်။ ဆုံးမပဲ့ပြင်တယ်။ တိုးတက်ကြီးပွားအောင် လမ်းညွန်တယ်။
စာပေဟောပြောပွဲတော့ မသိဘူး။ ၉၉-ခုနှစ်ကြမှ ဆရာအောင်သင်းရဲ့  စာပေဟောပြောပွဲ တိပ်ခွေ နို့ဘိုးဒုက္ခသည်စခန်းမှာ နားထောင်ရတယ်။ ကြိုက်လွန်းလို့ အထပ်ထပ်အခါခါနားထောင်ခဲ့ရင်းနဲ့ ဆရာအောင်သင်းကိုရင်းနှီးသွားတယ်။ သူက ကျေးဇူးရှင်ပါ။
သြစီကိုရောက်ပြီး နောက်ပိုင်း မြန်မာစာနဲ့ကင်းတယ်။ စာလည်းမဖတ်ဖြစ်ဘူး။ ဘလော့ဂ်ပေါ်လာတော့ စာရေးတာ ၀ါသနာပါသွားတယ်။ ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ် ရေးချင်လာတယ်။ ကိုယ်ရေးတာကို ကြိုက်တဲ့သူရှိရင် အားပေးတယ်။ မကြိုက်ရင်ဆဲတယ်။ ဒါကို အရသာတွေ့တော့ စာရေးဖြစ်တယ်။ တက်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ ၀ါသနာဖြစ်သွားပြီကိုး။
နိုင်ငံရေးအမြင်၊ လူ့ဘ၀နဲ့ဆိုင်တဲ့အယူအဆ၊ အတွေးအမြင်တွေကို ကိုယ်စိတ်သန်ရာရေးတယ်။ အဓိကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အမြင်ကိုရေးတယ်။ မှားရင်လည်းမှားမယ်။ မှန်ရင်လည်းမှန်မယ်။ ဘိုလိုပြောရင် Who knows? ဘယ်သူမှ အမှားအမှန်ကို အတိအကျမဆုံးဖြတ်ဘူး။ Science မှ မဟုတ်တာနော်။ Science is objective လေ။
အထက်ကပြောသလို မိုက်ရင်သူများထက်သာအောင်မိုက်၊ လိမ္မာရင်သူများထက်သာအောင် လိမ္မာဆိုတာကို အရမ်းသဘောကြတဲ့အခြေခံက ဒါပဲ။
အဖေက ဒီစာသားလေးကို အိမ်ရှေ့ သစ်သားပြားနံရံမှာတွေ့တော့ ကျနော့်ကို ဒီလိုပြောတယ်...
သူပြောတော့ ကျနော် အားရပါးရ ပြုံးခဲ့ပါတယ်။
တနေ့မှာ ယောင်္ကျားဖြစ်သူမှ ချစ်ဇနီးထံ စာတစ်စောင်ခုလိုရေးသတဲ့..
အချစ်လေးရေ! ကိုယ်ဒီလ အသုံးများသွားလို့ ပိုက်ဆံမပို့နိူင်တော့ဘူးကွာ။
ဒါပေမယ့် မင်းအတွက် ကိုယ် အနမ်းပေါင်း ၁၀၀ ပို့လိုက်တယ်နော် အချစ်လေး
နောက်ရက် အနည်းငယ် အကြာမှာတော့ သူ့မိန်းမ ဆီက စာပြန်လာပါတယ်..
ကိုကို့ရဲ့ အနမ်းပေါင်း၁၀၀ အတွက်ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ဒီလ အသုံးစရိတ် ကို
၁။ နွားနို့ ပို့သမား ကို တစ်လစာ နွားနို့အတွက် အနမ်း (၂) ပွင့်၊
၂။ လျှပ်စစ် ဌာန က လူကို တစ်လစာ အနမ်း (၇) ပွင့်၊
၃။ အိမ်ပိုင်ရှင် ကတော့အိမ်ငှားခ မယူ ပဲ တစ်နေ့ ကို အနမ်း ၂ ပွင့် ၃ ပွင့် လာယူတယ်၊
၄။ supermarket က တော့ အနမ်းနဲ့တင်မရလို့ တစ်ခြားဟာပါ ထပ်ပေးလိုက်ရတယ်၊
၅။ တစ်ခြားအထွေထွေ က အနမ်း ပွင့် ၄၀ ဒါပေမယ့် မပူပါနဲ့နော်ကိုကိုရယ် နော် ချစ်မှာ အနမ်း
ဒီလ တော့ ကောင်းကောင်းလောက်ပါတယ်။
စာဖတ်သူများလည်း ချစ်ချစ်တို့ဆီ အနမ်း(၁၀၀)ပို့ရင် သတိတရလေးရှိဖို့ပါ
မြန်မာ့စတိုင်ဂျာနယ်ကို မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ထုတ်ဝေသည်။ ပေးပို့သူ အယ်ဒီတာ ကိုထိုက်အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Myanmar's Style - Vol 1, No 1..PDF ( for Email)